GIS Manifold - Bogga 3 - Geofumadas
Manifold waa mid ku haboon GIS
Wuxuu sii daayey version 8.0.10.0 ee Manifold GIS
Noocan Manifold waa la shaaciyey, tan iyo noocii 8.0 waxaa jiray 117 isbeddel, kuwaas oo badankood loogu talagalay hagaajinta xawaaraha maaraynta xogta. Xaqiiq ahaan, waxay maqleen inta badan cayayaanka ay soo sheegaan kuwa sida khaldan ugu khamaaray codsigan, sidan oo kale ...
Dgn Dwg GPS GIS kala cayncayn ah SHP
Geospatial - GIS, GIS kala cayncayn ah
Xidhiidhinta xogta MySQL ee Manifold GIS
Maalmahan waan mashquul doonaa, waxaan sugayaa dulqaadkaaga laakiin waa inaan u cabo cagaaran tan; Waxaan rabaa inaan ku xiro nidaam leh xogta ku jirta MySQL nidaamka khariidaynta ee ku kaydsan Manifold GIS. Manifold wuxuu sidan ku sameeyaa ODBC qaab fudud, sidoo kale MySQL wuxuu ka abuuri karaa adeeg macluumaad oo noqon kara ...
Sida loo dhaqaajiyo shatiga Manfold GIS
Halkaas waxaan ku arkaa su'aasha ku jirta Google Analytics marar aad u badan, markaa aan ka wada hadalno xoogaa cabitaan ah tan. 1. Soo Degso Manifold Suuragal ma ahan inaad kala soo baxdo Manifold nooc kasta oo kale, illaa aad ku bixiso kaarkaaga deynta ($ 245 doolar) nooca shakhsiga ah, ka hor 30 maalmood ka hor waxaad soo sheegaysaa inaadan ku qanacsaneyn ...
GvSIG OS GIS kala cayncayn ah
Toddobaadkan wuu adkaaday, ka dib markii farsamo yaqaan aad u wanaagsan oo la socday mashruuca in ka badan sannad uu is casilay, waxay ahayd inaan qabto aqoon-isweydaarsiyadii uu ka bixin lahaa Manifold ee loogu talagalay isticmaalka degmada. Isla mar ahaantaana, waa inaan diyaariyo laba macallin oo beddelaad cusub ah. Aqoon isweydaarsigii ugu horreeyay wuxuu ahaa dib u eegista Microstation ...
Baridda CAD / GIS, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Buugga Manifold ee isticmaalka dawladaha hoose waa diyaar
Waqti ka hor waxaan kuu sheegay inaad ku mashquulsan tahay sameynta buug-gacmeed, maadaama ay diyaar u tahay mahadsanid taageerada cajiibka ah ee farsamo yaqaan bartay isticmaalka Manifold xoog laakiin hadda waa khabiir. Iyada oo aan ku dhiseyno tusmada oo ay ahayd tii soo saartay qaybta tijaabada ee qayb weyn ...
Sida loo xiro GvSIG leh Manifold GIS
Waxaan hayaa xog ku dhex jirta noocyo kala duwan oo joodatabase ah, oo leh kordhin .map ah waxaanan rabaa dadka isticmaala GvSIG inay helaan. Aan aragno laba dariiqo oo kala duwan oo loo sameeyo: 1. Iyada oo loo marayo Adeegyada Muuqaalka Webka (WFS) Tan waxaa lagu sameeyaa iyadoo la abuurayo adeegyo wfs leh Manifold, in kasta oo aan sharraxay dhowr bilood ka hor, haddana waxaa lagu soo koobay: Fayl / dhoofinta / html ...
GvSIG, GIS kala cayncayn ah
GIS Manifold; Qalabka dhismaha iyo qaabaynta
Waxaan uqaddarineynaa boostadan si aan u aragno aaladaha lagu dhiso oo wax looga beddelo xogta Manifold, arimahan xal-u-helidda 'GIS' waa mid aad u daciif ah, iyadoo la xaddidayo saxnaanta "ugu yar" qalabka CAD tan iyo markii lagu keydiyo keydka xogta waxay u baahan tahay ku xaddid "saxsanaantaada" tiro jajab tobanle ah. Waa…
Miiska jaantuska la soo qaado Manifold GIS
Markii hore waxaan aragnay shaqooyin kala duwan oo Manifold ah, kiiskan waxaan arki doonaa sida loo soo dhoofiyo iskuduwaha jira faylka sare. 1. Xogta garaafku wuxuu muujinayaa hawsha kala goynta ee ay tahay in lagu sameeyo guri. Waxaa jira siyaabo kale oo loo sameeyo nidaamkan, mid ka mid ah ayaa ah in si toos ah xogta looga soo dejiyo gps iyada oo loo marayo ...
GPS GIS kala cayncayn ah
Shaqooyinka Fursadaha ee Khabiirada GIS
Ma aanan ka helin fursadda goob fagaare ah maanta, taas oo dareenkeenna soo jiidanaysa maxaa yeelay shardiga ayaa ah maareynta GIS ee hoos timaada deegaanka Manifold. Sidaas darteed qofkasta oo raadinaya, iyo inuu u dhiirrigeliyo saaxiibbada Manifold, waa kan xogta. Fursaddu waa tan ...
Isku xirka miisaska Manifold
Jadwalka isku xidhka ayaa ah ikhtiyaarka qalabka GIS si uu awood ugu yeesho inuu iskuxirayo xogta laga helo ilo kala duwan laakiin ay wadaagaan goob guud. Tani waa wixii aan ku sameynay ArcView oo ah "ku biir", Manifold wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku sameyno labadaba si firfircoon, taas oo ah, xogta kaliya ayaa lala xiriiriyaa; iyo waliba qaab aan xiriir la lahayn, maxaa ...
ArcView Dgn Dwg GIS kala cayncayn ah
Goob wanaagsan oo IMS ah ayaa la sameeyay Manifold
Maalmo ka hor ayaan sharraxay sida loo abuuro adeeg khariidad iyadoo la adeegsanayo Manifold GIS waxaanan abuurnay goob ASP ah innagoo adeegsanayna shaxdii ku timaadda hab-dhaqan ahaan iyo server-ka maxalliga ah ... 23 daqiiqo. Boggan magaalada Niagara Falls (Niagara Falls) ee California Ontario waa tusaale wanaagsan oo ah waxa ...
Waxaan helay codsi ka yimid qof wax ku barta cilmiga joomatikada ee Argentina UTEM ee Chile iyo borofisar ayaa u wakiishay hawl isaga ah Manifold; markaa waxaan ka faaiidaystaa fursad aan wax kaga qoro. 1. Miyay noocyadu kala duwan yihiin taageerida cilmiga dhulka? Haa, tan awgood waa inaad dhaqaajisaa xulashada tafatirka la wadaago "wax ka beddel / wadaag wadaag". Sidan oo kale, dulinka dulinka ...
Subax wanaagsan, aqrin wanaagsan iyo caddayn fiican oo ku saabsan sida GvSIG u sameeyo iyo dabcan, si loo barbardhigo Manifold Aan aragno sida labadan aaladood ugu dhaqmaan qaababka ay akhriyaan: GvSIG Maareynta Mashruuca Manifold: Qaabka gvp waa maamule xog, maahan waxaa ku jira macluumaad gudaha ah. La mid ah ArcView apr, ama sida ...
Waqtigaan la joogo oo "laygu qasbay" inaan galo GvSIG, waa kan aragtidaydii ugu horreysay. Saaxiibtinimo. Markii aan daabacayay buuga 371, waxaan sameeyay aragti ah in qalabkan loo sameeyay AutoCAD iyo isticmaalayaasha ArcView. Isku ekaanta ArcView ayaa aniga igu sugaysay fudaydkeeda "muuqaalka, miiska, khariidada" laakiin ...
Barnaamijka GvSIG - Aan dhex galno markaa ...
Waan ku dhex dhuumaaleysanayay, laakiin sinaba uma suurogasho, koox ka mid ah dadka aan sigaarka cabbin oo doonaya koorso gvSIG ah ayaa horay u soo baxay, marka waxaan haystaa toddobaad aan ku barto sida loo isticmaalo oo aan u bilaabo umeerinta igu qaadan doonta 2 toddobaad ee jadwalkayga fiidkii. Sidoo kale qoraalkan waxaan ku bilaabayaa qayb cusub gudigeyga ...
ArcView Dgn Dwg ESRI GvSIG OS KML GIS kala cayncayn ah SHP
Geospatial - GIS, GvSIG, GIS kala cayncayn ah
Waa hagaag, taasi waa nolosha ... Hadda, waxay ku xayiran tahay soo saarista buug loogu talagalay hirgelinta nidaamyada macluumaadka juqraafiyeed ee loogu talagalay cadastre-ka degmada iyadoo la adeegsanayo GIS. Kaliya laba toddobaad ayaan haystaa si aan u sameeyo, markaa waxaan ka rajaynayaa taas inaan awood u yeesho inaan soo dejiyo waxyaabaha ugu muhiimsan. Waad ku mahadsantahay fahamkaaga iyo daacadnimadaada, hada waxaan kugula talinayaa Geomaticblog, ...
Boggii hore Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 page Next